Mother's Power (အမေ့အားမာန်..) - ဘာသာပြန် (အမေများနေ့ဂုဏ်ပြု ကဗျာလေးပါ..) | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ကဗျာ » Mother's Power (အမေ့အားမာန်..) - ဘာသာပြန် (အမေများနေ့ဂုဏ်ပြု ကဗျာလေးပါ..)
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 1:31 PM
Posted by မိုးသက် at 1:31 PM Read more
နေမင်း May 12, 2012 at 4:05 PM
ကြီးမြတ်သူကြီးလို ဆိုထိုက်ပါတယ် သယ်ရင်းရေ...
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် May 12, 2012 at 4:41 PM
ရင်ထဲကိုေ၇ာက်သွားတဲ့ကဗျာပါပဲ။ ၃ခါလောက်အေးအေးဆေးဆေးဖတ်လိုက်တယ်
ko naw May 12, 2012 at 11:50 PM
Nice post brother.......... thank for your post.
Snow May May 13, 2012 at 4:24 AM
မူရင်းကဗျာကကောင်းသလို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကဗျာကလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်. သားသမီးတိုင်းရဲ့ရင်ထဲကို ထိတယ်